Hatsarao ny hatsaran'ny sary amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Hatsarao ny hatsaran'ny sary amin'ny Photoshop
Pablo Gondar | | sary, Photoshop, Tutorials
Hatsarao ny hatsaran'ny sary amin'ny Photoshop amin'ireo sary rehetra izay tsapanao fa tsy manana fiainana sy maranitra amin'ny alàlan'ity programa fanovana sary afaka manatsara ny sarinao rehetra ianao hahazoana valiny mahasarika.
Isika rehetra dia manana sary taloha ao an-trano na sary nalaina tamina fakan-tsary ratsy, sary izay tiantsika fa noho ny antony iray na hafa dia tsy dia nahasarika maso loatra akory. Miaraka amina fitaovana Photoshop vitsivitsy azonao ahitsio ny lesoka isan-karazany mifandraika amin'ny kalitaon'ny fahitana ny sarinao. Ny fahatsiarovana tsara dia tokony hatao maty amin'ny fomba tsara indrindra.
Tena ara-dalàna ny mihaona amin'ny sasany Sary "bland" misy saturation kely miloko na misy fifanoherana kely dia kely izay mahatonga ny sary hanana rivo-piainana manjavozavo sy fisaka, ity azo amboarina amin'ny fanovana kely vitsivitsy amin'ny Photoshop miaraka amina fitaovana tena mora ampiasaina.
Alohan'ny hanombohanao manao ny tolo-kevitra voalaza ao amin'ity lahatsoratra ity dia ilaina ny manondro fa ny fiovana rehetra natao tamin'ny sary dia miovaova arakaraka ny zavatra tiana manokana, arakaraka ny olona izay retouches ireo sary no hanova kely na hafa.
1 Mamirapiratra sy mifanohitra
2 Hamafin'ny loko
3 Fandanjana loko
4 Fanitsiana loko voafantina
Mamirapiratra sy mifanohitra
Ny zavatra voalohany halehantsika manitsy ny sarintsika dia ny mifanohitra miaraka amin'ny tanjon'ny fahazoana sary manana tanjaka sy fanavakavahana eo anelanelan'ireo faritra rehetra ao aminy. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mamorona a isika sosona fanitsiana mifanohitra, ity fitaovana ity dia miorina eo ambanin'ny sosona. Afaka manao an'ity sosona fanitsiana ity isika ovay ny mampiavaka ny sarinay amin'ny zavatra tiantsika.
Podemos hampitombo ny hamafana ny lokon'ny sary iray mamorona a sosona fanitsiana henjana, io sosona fanitsiana io dia mamela antsika tsy mampitombo mahavoky loko fa ahenao ihany koa. Raha efa antitra ny sarinay dia ilaina tokoa ny manova an'io ampahany io ao Photoshop.
Raha mitady isika mamorona rivo-piainana mangatsiaka na mafana Podemos ovao ny fandanjalanjan'ny loko miaraka amin'ny loko fanitsiana fandanjana loko. Ity safidy ity dia atoro anao fatratra fandefasana loko marinaOhatra, raha manana loko manga ny sarinay, azontsika atao ny manova an'io loko io amin'ny loko hafa.
Fanitsiana loko voafantina
Raha mila manao a fanitsiana loko manokana vitantsika izany amin'ny fitaovana fanitsiana mifantina. Ity sosona fanitsiana ity dia mamela antsika manova loko marina tena marina ary afaka mamorona fisafidianana faritra manokana amin'ny sary ary avy eo manova ny loko amin'ity safidy ity. Safidy tsara io raha mitady valiny matihanina kokoa izay toerana tena ilaina amin'ny antsipiriany.
Photoshop Izy io dia fanampiana lehibe ho an'ireo mpitia na tsia an'ny sary maniry mamelombelona fotoana amin'ny fomba matihanina indrindra. Amin'ny fomba mora dia hahazo fahatsiarovana an-tsary ny kalitao avo indrindra azo atao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Hatsarao ny hatsaran'ny sary amin'ny Photoshop
Tetikasa mahaliana azo ao amin'ny Google Open Source
Fandefasana ny kinova Espaniola an'ny tonian'ny sary Canva